Movies Archives - Page9of 57 - Popular
ရုံမတင်ခင်ကတည်းက ပရိ သတ်တွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေကြား အထူးအားပေးမှု ရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ နေတိုးကလည်း ...''ပရိသတ်တွေ ကြားထဲမှာ တော်တော်လေးလည်း review ကောင်းကောင်းတွေ၊ Comment ကောင်းကောင်းတွေ ရ ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါ တယ်။ ရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာ…
'မင်းသွေးက ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ အားတော် တော်ထည့်ထားတယ်။ အမြွှာညီအစ်ကိုနှစ် ယောက်ထဲက ညီအငယ်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင် ရတဲ့ ဇာတ်ကားပေါ့။ မင်းသွေးက သူကျရာ နေရာမှာ တာဝန်ကျေအောင် လုပ်တတ် တဲ့ လူမျိုးပါ။ မုန်းစွဲဇာတ်ကားဆိုရင် သူ အရမ်းကြည့်ချင်ပေမယ့်…
''ဒီဇာတ်ကားက နေခြည့်အတွက် ပထမဦးဆုံးပါဝင်ရိုက်ကူးတဲ့ ဟာသဇာတ်ကားပါ။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ အကုန်လုံးက နေခြည့်ကို သင်ပေး ကြတယ်။ နေခြည်လုပ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကို အကုန်လုံးက ရယ်ကြတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း နေခြည်ပီတိဖြစ်မိတယ်။ အားလည်း တက်တယ်။ နေခြည်မရိုက်ကူးခင်ကတည်းက စိတ်ပူနေတာ။ ဟာသဇာတ်…
ဇာတ်ကားထဲမှာ ခွန်းဆင့်နေခြည်က ရေဆင်းချိုးတဲ့ အခန်းတွေလည်း ပါဝင်နေတာကြောင့် အဲဒီဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ဘယ်လိုရိုက်ကူးခဲ့ရလဲဆိုတာ မေးမြန်း ကြည့်တဲ့အခါ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင်လုပ်ရမယ့် တာဝန်ရှိတယ်လို့ အခုလိုပဲ ပြောပြပါတယ်။ ''အဲဒီဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ အကုန်လုံးတော့ မချွတ်ခဲ့ပါဘူး။ ထဘီလေးပဲ…
''အခုခေတ်ကကလေးတွေ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်လာဖို့က တအားလွယ်ကူတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ရှိနေတာကိုး။ တခြားအနုပညာအလုပ် မလုပ်ဘူးဆိုရင်တောင် သူတို့ရဲ့ စတိုင်လ်လေးတွေ ကြည့်လို့ကောင်းနေမယ်ဆိုရင် လူသိသွားဖို့ပေါ်ပြူလာဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်။ အစ်မစဉ်းစားနေတာက . . .
အမေက ၁၅ နှစ်သမီးကတည်း ကဒီလောကထဲဝင်လာတာ။ ၁၅ နှစ် နောက်ပိုင်း အချိန်အကုန်လုံးက ရုပ်ရှင်လောကသားတွေနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ ရတာပေါ့။ အဲဒီအတွက် ရုပ်ရှင်ကို အမေကချစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် . . .
ကျွန်တော်ဒီဇာတ် ကားလေးကို ရှုံးရင်ရှုံးပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒါဟာ ပထမ တစ်ချက်ကတော့ ကျွန်တော့်အနုပညာတင်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်မှာ ဖန်တီးမယ့်လူငယ်တွေ မျိုး ဆက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီမျိုးဆက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီးတော့ ကောင်းမွန်တဲ့လွတ်လပ် တဲ့ နိုင်ငံအပေါ်အကျိုးပြုစေမယ့် လူတွေပေါ်ကို အကျိုးပြုစေမယ့်ဇာတ်ကားတွေ ကျွန်တော်ရိုက်ကူးစေချင် ပါတယ်။…
သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီကတော့ သူ့ရဲ့ တတိယမြောက်ဇာတ်ကား ဖြစ်တဲ့ Now And Ever ဇာတ်ကား အတွက် Pre-Production တွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Now And Ever ဇာတ်ကားဟာ ဇဏ်ခီကိုယ်တိုင် ရေးသားထားတဲ့…
ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့ ပဲခူးမှာ အလှူအတန်းကြီးကျွေးချင်တဲ့အကြောင်း မေကဗျာပြော 727 views